Mayelana NATHI - Geneham Pharmaceutical Co., Ltd.
Isungulwe ngo-2006, iGeneham Pharmaceutical Co., Ltd.ngumhlinzeki wezixazululo zezitshalo zemvelo ezinamandla amakhulu kanye nokuhlangenwe nakho okucebile kocwaningo, ukuthuthukisa, ukulima, ukukhiqiza nokumaketha, sizinikele ekuthuthukiseni izithako ezisebenzayo zezitshalo ngaphakathi kokudla okunomsoco nokudla okunempilo , ukudla neziphuzo zezempilo, izimonyo, izithasiselo ze-phytogenic feed kanye nezimboni ezinomsoco.
Ngokuhlungwa nokukhula kwe-15years, iGenaham yathuthukisa umugqa wonke wokukhishwa kwe-botanical okulinganiselwe kwamanye amazwe, kufaka phakathi:
1. Ama-antioxidants aluhlaza futhi aphephile avikela ukudla ngokwemvelo ekulweni namachibi futhi enweba ishalofu lempilo
2. Uchungechunge lwemikhiqizo esekelayo kashukela egazini
3. Uchungechunge lwemikhiqizo yokwandisa nokusekela i-Male Male
4. Uchungechunge lwezithasiselo zokuphakelwa kwezilwane kanye nabagqugquzeli bokukhula kwemvelo
Imboni yethu yokuqala itholakala eLiuyang National Biological Industry Complex okuyindawo engamahektare ayi-10; isimo esisha sesikhungo esijwayelekile sokukhishwa kwe-Art GMP sifaka izintambo ezi-3 zokucubungula umugqa nolayini wokuqeda wokuqamba, ukuhlanganisa, ukugoqa nokupakisha. Amandla wokukhiqiza anyanga zonke yiRosemary ekhipha amathani angama-30, i-Mulberry iqabunga likhipha ama-25tons kuthi imbewu yeFenugreek ikhiphe ama-20tons.
Isikhungo sethu sokucwaninga ngaphakathi sisebenzisana kakhulu neCentral-South University of Pharmaceuticals, iHunan Agriculture University kanye neHunan University of Chinese Medicine.
Lesi sikhungo sinesethi ephelele yemishini yocwaningo nentuthuko, kufaka phakathi umugqa ogcwele wemishini yokuphumula; HPLC, GC, UV, CE, HPTLC njalonjalo. Singahlola ngokuzimela futhi silawule izinkomba zekhwalithi ezifana ne-assay, i-microorganism, izinsalela ze-solvent kanye nezinsalela ze-pesticide.
Ithimba lobungcweti lesayensi nentuthuko elinamalungu ayi-18, ngenxa yemisha yabo yansuku zonke ngezixazululo zemvelo ezinamafomu ahlukile nokucaciswa, siyakwazi ukuhlangabezana nezidingo ezithile nezidingo ezivela kumakhasimende ethu ngezinga eliphakeme njalo, amanani aphansi kakhulu nezinsizakalo zamakhasimende ezibalulekile .
IGeneham inendawo yokulima ehlanganisa amahektare angaphezulu kuka-2 000, isisekelo sethu sokulima iRosemary eHanshou, Changde naseHubei esifundazweni, nasezindaweni zokulima kukamalibhele eXiangxi, esifundazweni saseHunan.
Isisekelo sokutshala i-rosemary
Isisekelo sokutshalwa kukamalibhele
Ifektri yethu ithole izitifiketi zekhwalithi zomhlaba wonke zeKosher, HALAL, FSSC, FAMI-QS, Izitifiketi ze-Organic (EOS) kanye nezitifiketi ze-Organic (NOP).